Hafatra - Countdown ho an'ny fanjakana
Valeria - Hiverina tsy ho ela i Jesosy
Fa aloha, hiseho tampoka ny fitsapana…
Maro aminareo no hahita ny fiverenan'ny Zanako am-pifaliana.
Mifikitra mafy amiko. Efa tapitra ny fanjakan'ny fahavalo.
Vatana sy fanahy ary fanahy isika.
Ilay Fanapahana lehibe
Ny fiandohan'ny fahoriana.
Gisella: ny fiandohan'ny fahoriana
Fenoy ny jironao fa aza mangina!
Marija: mihavao amin'Andriamanitra
… Ary hahita fahagagana ianao.
Edson - Halaiko ireo fanomezana
… Ary omeo ireo izay manao ny Sitrapoko.
Ho avy i Jesosy!
Fahatanterahan'ny "Rainay" izany.
St. Faustina - Omeo ahy ny sofinao
Homeko ny hery sy herimpo ilainao ianao.
Marco - Hanova anao i Jesosy
… Raha mandray azy amin'ny alàlan'ny vavaka sy fiantrana ianao.
1 2 3 4 5 6 ... 52 manaraka »
antikristy Fivadiham-pinoana Malagasy fiangonana katolika famaizana Chastisements fiangonana kominisma fifanjevoana fiovam-po Coronavirus Covidien-19 division Ny fandriam-pahalemana Eokaristia finoana tahotra Fr. Michel Fahazavana momba ny feon'ny fieritreretana Mametaveta ny fo Jesosy fanaintainan'ny mpiasa Mary New World Order Ilay Reninay fanenjehana Fiarovana ara-batana Papa vavaka faminaniana fanadiovana fialofana fibebahana revolisiona sapile fisarahana Soratra Masina Fiarovana ara-panahy fitsapana fahoriana Triumph fahatokiana fahamarinana ady fampitandremana
Nahatsiaro ny fiantsoana azy ireo hanomboka hanantona ny "The Movement of Président" any mpivady izay hisaintsainany ny hafatry ny Our Lady ny	Fr. Stefano Gobbi . Roa taona lasa izay no nanatanterahan'ireo tenin'i Jesosy ity: Nanomboka nitarika azy ny Our Lady, fa tamin'ny fomba tena faran'izay tsara indrindra. Nandritra ny cenacles, ary tamin'ny fotoana hafa, ity lehilahy ity dia hahita "eny amin'ny rivotra" eo alohany. Ny isan'ny hafatra avy amin'ilay antsoina hoe "Boky manga,"ny fanangonana ireo fanambarana nomen'ny Our Lady	Fr. Stefano Gobbi , "Ho an'ny pretra malalantsika ny zanakavavinay."